Public Health in Myanmar: ထမင်းလုံးတစ္ဆေခြောက်ခြင်း (Hypnogogic jerk)
ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်ယာဝင်တဲ့အချိန်ကျရင် အိပ်ပျော်ခါနီးဖြစ်နေတဲ့အချိန် အိပ်မက်လိုလိုနဲ့ တစ်ခုခုထဲကျသွားသလိုဖြစ်ပြီး ရင်ထဲမှာအေးခနဲဖြစ်သွား၊ ပြီးရင် ခန္တာကိုယ်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေ ရုတ်တရက် ဆတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီး လန့်နိုးသွားတာမျိုး ခဏခဏဖြစ်ဖူးပါတယ်။ အခုထက်ထိလည်း တခါတလေအိပ်မောကျခါနီးဆိုဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ထမင်းလုံးတစ္ဆေခြောက်တာလို့ မိဘတွေကပြောတတ်ပါတယ်။
အိပ်ခါနီး ထမင်းစားပြီး ထမင်းလုံးနင်းထားမိလို့ဖြစ်တာဆိုပြီးပြောလို့ နောက်ပိုင်းအိပ်ခါနီးတိုင်း ခြေထောက်ဆေးတဲ့အကျင့်ရသွားရော။ ပာုတ်တာမပာုတ်တာထက် ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့လေ။ ကျနော့်လိုပဲသူများတွေလည်း ကြုံဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုမှသိပ်ပံနည်းကျ (ပ ကိုအောက်မှာဘယ်လိုရိုက်လဲဗျာ။ ကျနော်မရိုက်တတ်လို့ အဲလိုပဲပေါင်းလိုက်တယ်) ဖြေရှင်းချက်လေးတွေဖတ်မိလို့ ထပ်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
အိပ်ပျော်ခါနီးအချိန်မှာ ပြုတ်ကျသလိုခံစားရပါတယ်။ အဲဒီနောက် တကိုယ်လုံးဆတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီး လန့်နိုးသွားပါတယ်။ အဲလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်ကို Hypnogogic jerk လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတာတော့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ကဖင်းနဲ့ ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ မအိပ်ခင်လုပ်ထားရတာတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ သူလည်းလူဦးရေရဲ့ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အိပ်ပျော်ခါနီးအချိန်မှာ တကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ လူရဲ့ကြွက်သားတွေပာာ ဖြေလျော့သွားပါတယ်။ အနားယူသွားတယ်ပေါ့လေ။ အဲဒါကိုဦးနှောက်က နားလည်မှုလွဲသွားပါတယ်။ ဦးနှောက်က အဲလိုကြွက်သားတွေဖြေလျော့ပြီး အနားယူသွားတယ်လို့မထင်ဘဲ တင်းတင်းရင်းရင်းရှိမနေတော့တဲ့အတွက် ခန္ဒာကိုယ်ကြီးပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ်။ အဲလိုဘာသာပြန်ရုံတင်မကဘဲ ခန္ဒာကိုယ်ကိုလည်း တုန့်ပြန်မှုတွေလုပ်ဖို့စေခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ခန္ဒာကိုယ်ကကြွက်သားတွေကလည်း balance ကိုထိန်းဖို့အတွက်ဦးနှောက်ပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့ပြုတ်ကျသလို ရင်ထဲမှာအေးသွားပြီး ကြွက်သားတွေအလုပ်ပြန်လုပ်သွားတဲ့အတွက် ဆတ်ခနဲ့တုန်ပြီး လန့်နိုးသွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ဖြစ်တတ်ပေမယ့် မူးယစ်ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ မော်ဖင်း၊ ပီာရိုအင်း၊ မက်သဒုန်း စတဲ့ဆေးဝါးတွေအသုံးပြုသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး Hypnogogoic jerk ပာာ အိပ်ပျော်ဖို့ခက်တဲ့သူတွေ၊ အိပ်ယာသက်တောင့်သက်သာမရှိတဲ့သူတွေမှာ ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မအိပ်မနေ အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေ(စာမေးပွဲနီးလို့ စာကျက်နေရတာမျိုး၊ အလုပ်ပြီးအောင်လုပ်နေရတာမျိုး)မှာဆိုရင် ပြန်အိပ်တဲ့အခါအိပ်ပျော်ခါနီးအချိန်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲလိုဦးနှောက်ကို အနားမပေးဘဲ အချိန်ကြာကြာခိုင်းထားတဲ့အခါ ဦးနှောက်ကပိုပြီး အမှားအယွင်းတွေဘာသာပြန်လို့ပါ။ ငယ်တဲ့အချိန်မှာပိုဖြစ်တတ်ပြီး အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ နည်းသွားတတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အကြီးဆုံးဆိုးကျိုးကတော့ အိပ်ရေးပျက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း တခါတလေအရမ်းအိပ်ချင်လို့ အိပ်ပျော်ခါနီးမှာအဲလိုမျိုး Hypnogogoic jerk ဖြစ်သွားရင် လန့်နိုးသွားပြီး ပြန်အိပ်ရခက်သွားတတ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့မပာုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တချို့သူတွေမှာတော့ ခဏခဏဖြစ်တဲ့အခါနောက်ပိုင်း အိပ်ရမှာကိုကြောက်လာပြီး စိတ်ရောဂါလိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုထမင်းလုံးတစ္ဆေခြောက်တာ ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုတာ နားလည်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ သားသမီးတွေရှိရင်တော့ ခြေထောက်ရေဆေးပါစေဦး။ ပာုတ်တာမပာုတ်တာထက် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းရှိတာပေါ့။ :)
Posted by Dr. Thurein Hlaing Win (www.academicmedicines.blogspot.com)
Posted by Thurein Hlaing Win
Thanks for sharing this because I am also feeling like your story and I did not know why it is happening. Now I realize that to scan my way of working in order to reduce stress.
Pho Soelay said...
I don't know about health insurance၊
please publishapost.
I am waiting for ,
Lynn Ko Maung said...
Not Hypnogogic Jerk.
It's called Hypnic Jerk or Hypnagogia.
jessicathelthel thelthel said...
အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို မြင်ဖူးသလိုခံစားရခြင်း (Déjà vu...
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ထိပ်ပြောင်ခြင်း (Alopecia)